सबैलाई सहयोग गर्ने शिशिर हात जोʼड्दै सबैसँग सहयोग माग्दै आए, शिशिरलाई के भयो ?(भिʼडियो हेर्नुस) – Ap Nepal
सबैलाई सहयोग गर्ने शिशिर हात जोʼड्दै सबैसँग सहयोग माग्दै आए, शिशिरलाई के भयो ?(भिʼडियो हेर्नुस)
यो परिवारको कथाले सबैको मन जित्यो र शिशिरले यो परिवारको गीत रेकर्ड गरिदिए र भिडियोको साथमा ल्याए । रचना रिमाल र कुमार अभिको पनि आवाज रहेको गीत यतिबेला चर्चामा छन् । गीतले सबैलाई रुवाएको छ । तर बुष्ट गरेर गीतको भ्युज बढाउने जमानामा शिशिको यो गीत ट्रेण्डिंगमा पनि आएको छैन । 5राम्रो भ्युज पाएपनि गीत ट्रेडिंगमा नआउँदा शिशिर दुखी छन् । शिशिरले सबैलाई सहयोग अपिल गरेका छन् ।
Prevआज बढ्यो सुनको मुल्यो , तोलामा यति मंहगियो
Nextरमेश प्रसाइको दोस्रो गीत एलिना चौहानसंग आउदै , रमेशले गीत बारे यसो भन्छन् (भिडियो हेर्नुस्)